सारा दु:ख बिर्सिएर देख्छु सपना म हजार, हो, म देख्छु केही मिठा सपना ! लखतरान देह थकित मन लिएर भर्खर फर्किएको छु म, केही छिन त आराम गर्न देउ एक्कै छिन कल्पना मा हराउन देउ ! मलाई हराउन देउ आफैँमा, रम्न चाहन्छु म, सपना को बगैँचा मा ! देश, परिवेश समाज र राजनिति आजित भइसकेको छु म, भुल्न चाहन्छु आफूलाई, यो स्वप्न नगरी मा ! म सपना देख्छु एउटा सुन्दर भविष्यको जहाँ हामी हुनेछौँ उनीहरु हुनेछन् । खुशीले पुलकित हुन्छु, एकै फड्को मा सगरमाथा चुम्ने हिम्मत राख्छु, मेरो सपना नटुटोस्, मेरो देश नफुटोस् । कहिले लाग्छ मेरा सपनाहरु ऐना का सिसा झैँ, उज्यालामा चम्किला देखिएका मात्र हुन्, ती क्षणभर मै चकनाचुर बनाइन सक्छन् । सायद भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउने असफल कोशिस गर्दैछु म ! तर पनि, हिम्मत हारेको छैन यो देश जति उनीहरुको हो, त्यति नै मेरो पनि हो । म र मेरो सपनाको अन्त्य छैन ! हो, म मिठो सपना देख्छु, एउटा सुन्दर संसार को कल्पना गर्छु । जहाँ तिमी र म हुनेछौँ उ
नियात्रा : घान्द्रुक को घुमाइ - ३
Aakar January 10, 2010
दोस्रो दिन विहान खाजा खाएर सबै जाना घोरेपानि यात्राको लागी तयार हुँदा ८:०० बजिसकेको थियो। होटलमा आफूले खाएको र सुतेको पैसा तिरियो। पोखरामा २००० रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तिखेढुङ्गामा रु.२०० मात्र खर्च भयो। खर्च भएको पैसाको भिन्नता देख्दा हासो लाग्यो। सबै प्रकारले सर्वसुलभ पोखरा र नयाँपुलबाट एकदिनको खच्चर ढुवानीबाट सामान ल्याउनु पर्ने तिखेढुङ्गा। अच्चमको भिन्नता। तिखेढुङ्गाबाट घोरेपानी ६ घण्टाको ठाडो उकालो हो भन्ने थाहा थियो मलाई। समुन्द्र सतहबाट १५४० मिटर उचाईमा रहेको तिखेढुङ्गाबाट २७५० मिटरमा रहेको घोरेपानि पुग्दै थियौं हामी। उकालो जति भएपनि घोरेपानि हाम्रो गन्तब्य भएकाले हामी उकालो चढ्न तर्फ लाग्यौं। ढुङ्गा छापेर बनाइएको सिंडी जस्तो बाटोभरि सामान ढुवानीका लागि प्रयोग गरिएका खच्चरको मलमूत्र देखिन्थ्यो। कहिले काहिँ उकालो चढ्दै गर्दा ओरालो झरिरहेका खच्चरलाई बाटो छोड्दा ‘जनावर’को बाटो नछेक्नुनै उत्तम हो भन्ने पाठ सिकियो। उकालो ठाडो थियो। अगाडी बढ्न निकै गाह्रो भइरहेको थियो। मलाई बल्ल आफूले भारि झोला बोकिएछ भन्ने भान भयो। झोलालाई कर्तब्य ठानि बोकेर हिडिरहें म। कहिं थकाई मार्थे, कहिँ पान
Facebook Status became Colorful with Bra Color, But Why ?
Aakar January 09, 2010
करिब १-२ दिन देखि महिला साथिहरु को फेसबुक स्टाटसमा रङ (color) को नामहरु देखिन थालेको छ । हिजो कैयौँ साथिहरु को फेसबुक स्टाटस मा कलर को नाम देख्दा म तिनछक्क परेको थिँए, कसैले red, कसैले green, कसैले blue, कसैले black, कसैले white, कसैले blue, कसैले pink, त कसैले creamy लेखेका थिए आफ्नो फेसबुक को स्टाटसमा । मलाई थाहा थिएन किन लेखेको हो, के लेखेको हो, कसको लागि लेखेको हो तर अधिकाशं को स्टाटस मा कलर को नाम मात्र भएपछि कौतुहलता जाग्नु स्वभाविक पनि हो । सायद, तपाईहरु ले पनि याद गर्नुभयो होला, प्राय महिला साथिहरु को फेसबुक स्टाटस मा कलर को नाम लेखिएको छ, अनि कति ले थाहा पाउनु भयो होला यो के हो भनेर अनि कति चाँहि अझै कुहिरो को काग नै बन्नुभएको होला । अनि सायद तपाई ले कमेन्ट गर्दा, के हो ? भनेर प्रश्न सोध्नु भएको भएपनि, जवाफ भने पाउनुभएको छैन होला । आउनुहोस्, यो विचित्र संसार मा हुने रोचक घटना अनि पराल को आगो झैँ फैलन पुगेको यो फेसबुक स्टाटस को बारेमा केही चर्चा गर्दैछु । ट्विटर मा आएको हिजो globalthoughtz.com को एउटा ट्विट निकै रोचक लाग्यो । अनि हत्त न पत्त ग्लोबल थट्ज को ट्विटलाई पच्